assistant - Synonyms of assistant | Antonyms of assistant | Definition of assistant | Example of assistant | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for assistant
Top 30 analogous words or synonyms for assistant
Cortana Cortana သည် လက်ရှိအချိန်တွင် ဆော့ဖ်ဝဲ၏ အမျိုးအစားနှင့် နေရာဒေသကိုမူတည်၍ အင်္ဂလိပ်၊ ပေါ်တူဂီ၊ ပြင်သစ်၊ ဂျာမနီ၊ စပိန်၊ တရုတ်၊ ဂျပန် ဘာသာစကားများ ဖြင့် အသုံးပြုနိုင်သည်။ Cortana သည် အဂိကအားဖြင့် လက်ထောက်အကူအညီ (assistant) ဆော့ဖ်ဝဲများဖြစ်သည့် Apple's Siri, Google's Google Assistant, Samsung's Bixby, and Amazon's Alexa ကို ယှဉ်ပြိုင်ရန် ထုတ်လုပ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။
Cortana Cortana သည် Intelligent Personal Assistant (IPA) ဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ မိုက်ခရိုဆော့ဖ်မှ ဖန်တီးထားပြီး မိုက်ခရိုဆော့ဖ်ဝင်းဒိုး ၁၀၊ ဝင်းဒိုး ၁၀ မိုဘိုင်းဖုန်းများ၊ ဝင်းဒိုးဖုန်း ၈.၁ (ယခု Bing Mobile ဖြင့်အစားထိုးထား) ၊ မိုက်ခရိုဆော့ဖ် Band, Xbox One, iOS နှင့် အန်းဒရိုက်တို့တွင် အသုံးပြုထားသည်။
လီကာ-ရှင်း သူ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကုမ္ပဏီဖြစ်သော Horizon Ventures သည် Double Twist မှရှယ်ယာများကို ဝယ်ယူခဲ့သည်။ လီကာရှင်း ဖောင်ဒေးရှင်းမှလည်း social networking ဝဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုဖြစ်သော Facebook မှ ရှယ်ယာ ဝ.၈%ကို ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း ၁၂ဝကို ၂ခါခွဲပေး၍ ဝယ်ယူခဲ့သည်။ ထို့နောက် သီချင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း Spotify တွင် ဒေါ်လာ သန်း၅ဝ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။ ၂၀၀၉ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁ဝ အစောပိုင်းကြားတွင် iphone ၏ application တစ်ခုဖြစ်သော Siri (Virtual Personal Assistant) ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ထုတ်လုပ်ခြင်းကို ဒေါ်လာ ၁၅.၅သန်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သေးသည်။
လှထွန်း၊ ဦး မေတ္တာရိပ်မွန်(ကင်ဆာ)ဖောင်ဒေးရှင်း ၁၉၅၄-ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိပြီး မူလကုမ္ပဏီ၌ Assistant Partner အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရာ လစာငွေကျပ် ၃,၅၀၀ အထိ တိုးမြှင့်ပေးခြင်း ခံရသည်။ ၁၉၅၈-ခုနှစ်တွင် အဆိုပါကုမ္ပဏီ၏ ပထမဆုံးမြန်မာ Partner ဖြစ်ပြီး လစာငွေကျပ် ၄,၅၀၀ နှင့် အမြတ်ငွေ သုံးပုံ နှစ်ပုံ ခံစားခွင့် ရရှိသည်။ ၁၉၆၂-ခုနှစ်တွင် အင်္ဂလိပ်တို့က လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးကို လွှဲပေးသဖြင့် U Hla Tun & Co. ဟု အမည်ပြောင်းလဲပြီး လုပ်ငန်းများ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သည်။
ဖေ၊ ဦး(မြန်မာပညာရှိ) သက္ကရာဇ် ၁၂၆၃ ခုနှစ်တွင် ဇနီးမရှိသည့် နောက်ပိုင်းတွင် ရန်ကုန်မြို့တွင် ဆက်လက်မနေထိုင်လိုသည့် အလျောက် အရှေ့တိုင်းကျောက်စာများကို လေ့လာလိုက်စားနေသူ မစ္စတာတော်စိန်ခိုနှင့် တွေ့ဆုံကျွမ်းဝင်မိပြီး ပုဂံမြို့ ကျောက်စာရုံးသို့ပြောင်းရွှေ့၍ မစ္စတာတော်စိန်ခို၏ လက်ထောက်အဖြစ်ဖြင့် ( ၁၅ ) နှစ်တိုင်တိုင် ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ကျောက်စာဝန်ရုံး၌ ကျောက်စာ မင်စာများကို ကူးယူရခြင်း၊ ပုဂံမြို့ရှိ ရှေးဟောင်းစေတီ ဂူကျောင်းများ စာရင်းများယူခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်းများကို ပြုလုပ်ရသည်။ ထို့ပြင် ကျောက်စာ၊ မှင်စာများကိုလည်း စုဆောင်း ရှာဖွေခဲ့ရသေးသည်။ မစ္စတာတော်စိန်ခို မရှိသည့်နောက်တွင်လည်း ဆက်လက်လုပ်ကိုင် ပြန်သေးကာ ထိုကျောက်စာ ဝန်ရုံးမှ အငြိမ်းစားရိက္ခာတော်ရ အဖြစ် ပင်စင်ယူသော အခါ၌မူ အသက်အားဖြင့် ( ၆၀ ) ပြည့်နေပေပြီ ဖြစ်သည်။ ၁၂၇၀ ပြည့်နှစ် တွင် ပုဂံမြို့မှ မန္တလေးမြို့ ရွှေကျောင်းကျောက်စာရုံးတွင် အမှုထမ်းပြီး ၁၂၇၄ ခုနှစ် ခန့်တွင် ကျောက်စာရုံး လက်ထောက် ကြီးကြပ်ရေး ( Assistant Superintendent ) အဖြစ်မှ အနားယူခဲ့လေသည်။ ထိုနှစ်မှာပင် မြန်မာနိုင်ငံ သာသနာပိုင် တောင်ခွင် ဆရာတော်ဘုရားကြီးက ဦးဖေအား သီရိစတုရင်္ဂဗလ ဘွဲ့တံဆိပ် ချီးမြှင့်ခဲ့လေသည်။
ရေဆင်းတက္ကသိုလ်များ ဗြိတိသျှ အုပ်ချုပ်မှုကာလ ၁၈၉ဝ ခုနှစ်မှစတင်၍ ရန်ကုန်မြို့၊ ကြည့်မြင်တိုင်၊ ရှမ်းလမ်းတွင် တိရစ္ဆာန်ဆေးကုအကူသင်တန်းကျောင်း (Veterinary Assistant Training School ) ကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ နှစ်နှစ်သင်တန်းဖြစ်ပြီး ၁၉၂ဝ ပြည့်နှစ်အရောက်တွင် နိုင်ငံခြားသားဆရာများဖြစ်သည့် ကြီးကြပ်ရေး တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန် ၅ ဦးနှင့် နည်းပြ တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန် ၁၂ ဦး ဖြင့် အဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့ ပါသည်။ မြန်မာလူမျိုး ဦးဖေသန်းသည် Bengal Veterinary College မှ ဘွဲရရှိခဲ့ပြီး ၁၉၂၃ ခုနှစ်တွင် မြန်မာလူမျိုး ပထမဆုံး ကြီးကြပ်ရေး တိ-ကု ဆရာဝန်အဖြစ် ယင်းကောလိပ်၌ ခန့်အပ်ခြင်းခံခဲ့ရပါသည်။ ၁၉၂၅ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလ တွင် ဘုရင်ခံ Governor Sir Harcourt Butler မှ ယခု အင်းစိန် မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန (ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး) တည်ရှိရာ အဆောက်အဦး ကို အုတ်မြစ်ချ၍ ၁၉၃၁ ခုနှစ်တွင် ယခင်နှစ်နှစ်သင်တန်းမှ သုံးနှစ်သင်တန်းသို့ အဆင့်မြှင့်သင်ကြားခဲ့ကြရပါသည်။
ဝင်းဝင်းလတ်၊ စာရေးဆရာမ ၁၉၆၈ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်မြို့ မရမ်းခြံ အမျိုး သမီး အထက်တန်းကျောင်း၊ အထက (၁) ကမာရွတ်က အခြေခံ ပညာ အထက်တန်း အောင်မြင် ခဲ့သည်။ ၁၉၇၆ ခုနှစ် ရန်ကုန် ဆေးတက္ကသိုလ် (၁) က ဆရာဝန် (ဆေးပညာ) ဘွဲ့ ရရှိ ခဲ့သည်။ ၁၉၈၁ ခုနှစ်မှ ၁၉၉၅ ခုနှစ် အထိ စစ်တွေ၊ ရန်ကုန်၊ မိုးကောင်း မြို့တွေမှာ လက်ထောက် ဆရာဝန် အဖြစ် ပြောင်းရွှေ့ တာဝန် ထမ်းဆောင် ခဲ့သည်။ ၁၉၉၅ ခုနှစ်မှာ ဆင်ပေါင်ဝဲ မြို့နယ် ကျန်းမာရေး ဦးစီး ဌာနမှူး အဖြစ် ကနေ အငြိမ်းစား ယူခဲ့သည်။ ၁၉၉၇ ခုနှစ် ဧပြီလက စလို့ ကုလ သမဂ္ဂ ဖွံ့ဖြိုးမှု အစီအစဉ် တခု ဖြစ်သည့် ဝေးလံ ခေါင်ဖျား မြို့နယ်တွေ ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းတွင် လူမှုရေး အရာရှိ အဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင် ခဲ့သည်။ ၂ဝဝ၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီမှ စပြီး ကလေး သူငယ်များ စောင့်ရှောက်ရေး အဖွဲ့ မျိုးဆက်ပွား ကျန်းမာရေး စီမံချက်တွင် တာဝန် ထမ်းဆောင် ခဲ့သည်။ Care International in Myanmar NGO တွင် Assistant Health Program Coordinator အဖြစ် ကွယ်လွန်ချိန်အထိ အလုပ် လုပ်ကိုင် နေခဲ့ ပါသည်။
ရှိတ်အပ္ပဒူရာမန်၊ ဒေါက်တာ ရန်ကုန် ဟိုက်စကူး ကျောင်းမှ ၁၈၈၄၊ အသက် ၁၄ နှစ်သားတွင် ခုနစ်တန်း အောင်ခဲ့သည်။ မဒရပ်မြို့ ဆေးကျောင်းတွင် ၄ နှစ် သင်ပြီးနောက် ၂၅ ဇူလိုင် ၁၈၈၉ မှ စ၍ ဆေးရုံ လက်ထောက် (Hospital Assistant) ရာထူး ထမ်းဆောင် ခဲ့သည်။ ယိုးဒယား နယ်စပ် ကော်မရှင်တွင် အထူး တာဝန် ယူခဲ့ ရသည်။ ပညာရေးတွင် အိန္ဒိယမှ ဒီဂရီမျှနှင့် ရောင့်ရဲ တင်းတိမ်ခြင်း မရှိသောကြောင့် အလုပ်မှ ခွင့်ယူကာ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ တွင် ပညာ ဆက်သင် ခဲ့သည်။ အင်းထရင့် ခေါ် ၉ တန်း စာမေးပွဲ (မက်ထရစ်တန်း)၊ အက်ဖအေ စာမေးပွဲ (အိုင်အေ) တို့ အောင်မြင် ပြီးနောက် အင်္ဂလန် ဆေးသိပ္ပံမှ ဗြိတိန် နိုင်ငံတော် ဆေးပညာ ဒီဂရီကို ရယူ ခဲ့သည်။ ၁၉ဝ၅ တွင် ရန်ကုန် ဆေးရုံကြီး၌ လက်ထောက် ဆရာဝန်ကြီး ရာထူးသို့ ခန့်အပ် ခံရသည်။ ၁၇ ဧပြီ ၁၉ဝ၅ တွင် ဒိစတြိတ် ဆရာဝန်ကြီး ရာထူးသို့ တိုးတက် ထမ်းဆောင် ခဲ့ရသည်။ ထို ရာထူးဖြင့် သုံးခွ၊ ရမည်းသင်း၊ ရွှေဘို၊ ဖျာပုံ၊ ကသာနှင့် အောက်ချင်းတွင်း ခရိုင် များတွင် အမှု ထမ်းခဲ့သည်။ ၁၉ဝ၇ တွင် ဟံသာဝတီ ခရိုင်၌ ကျောက်ကြီး ရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေး တာဝန် ယူခဲ့သည်။ ပလိပ်ရောဂါ ကာကွယ်ဆေး ထိုးရန် နှိုးဆော်ရေး တာဝန်ကို ရန်ကုန် မြူနီစီပယ် အတွက် ကူညီ ဆောင်ရွက် ပေးခဲ့သည်။ မြန်မာ စာပေတွင် ကျွမ်းဝင် နှံ့စပ် သောကြောင့် ပထမ သူနာပြု သင်တန်း စာကို ပြုစု နေခဲ့ရာ အပြီးတိုင် မရောက် ရှိခဲ့ပေ။
စန်ကာကူကျွန်းအငြင်းပွားမှု The Nixon Administration removed the Senkakus from its inclusion in the concept of Japanese "residual sovereignty" in presenting the Okinawa Reversion Treaty to the U.S. Senate for ratification. On October 20, 1971, Secretary of State William Rogers sentaletter to U.S Congress. In his letter, Acting Assistant Legal Adviser Robert Starr stated "The United States believes thatareturn of administrative rights over those islands to Japan, from which the rights were received, can in no way prejudice any underlying claims. The United States cannot add to the legal rights Japan possessed before it transferred administration of the islands to us, nor can the United States, by giving back what it received, diminish the rights of other claimants... The United States has made no claim to the Senkaku Islands and considers that any conflicting claims to the islands areamatter for resolution by the parties concerned." Several experts have attributed this Nixon Administration policy shift as having been influenced by White House overtures to China during 1971-1972, culminating in the Nixon visit to China.